ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အပြန်ခုန်ထွက်တွင် – အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သွားကြဖို့နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်သည်?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 23 2020 | < 1
သင်မကြာသေးမီကပြိုကွဲတဆင့်ကျော်သွားကြပြီဆိုရင်, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပြန်ခုန်ထွက်မှနည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်သည်? ဆက်ဆံရေးတစ်ခါတစ်ရံတွင်လွယ်ကူသည်မဟုတ်ပြီးနောက်ချိန်းတွေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာထွက်စတင်ခြင်း. အပြန်ခုန်ထွက်ပေါ်ဖြစ်ခြင်းခက်သည်, ဒါပေမယ့်ဒီအကြံပြုချက်ဘေးကင်းလုံခြုံသင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဒီမှာရှိတယ်!
ငါသည်သင်တို့၏အတိတ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းအရာအားလုံးကိုစွန့်ပစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းထည့်သွင်းတို့၏ဆက်ဆံရေးသည်လွန်ခဲ့သောကိုယ်ရေးအချက်အလက်. လူတွေဟာသင့်ကိုကွာရှင်းခံရလျှင်သိလို, ကွဲကွာ, မုဆိုးမစသည်တို့ကို. တူရာတစ်ခုခုဆိုလျက်, "ငါကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကမ္ဘာသို့အသစ်ဖြစ်၏" သင်ကအသစ်ဖြစ်သည့်အခါသုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေသည်. လူတိုင်းအချိန်မရွေးအသစ်!
အော့ဖ်လိုင်းကမ္ဘာလိုပဲ, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကမ္ဘာ Cheater နှင့်ပြည့်ဝ၏, မုသာဝါဒီများ, စသည်တို့ကို. သင်ပရိုဖိုင်းမှာရှာဖွေနေနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျတုံ့ပြန်ရန်ကြသောအခါသတိထားပါ. ထွက်စတင်ခြင်းနှင့်ပြန်ခုန်ထွက်ပေါ်ဖြစ်ခြင်းသင်အာရုံစိုက်မှုကိုပေးတော်မူမည်သူကိုလူတိုင်းလုပ်ဖို့အားနည်းချက်ဖြစ်လာမှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်. သင်သတိထားမရှိကြသည်ကိုတွေ့လျှင်ဒီဒုက္ခဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်.
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုအမှုအရာတွေအများကြီးပုန်းကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. တစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းအချိန်ယူ. သင်နောက်ပိုင်းမှာနောင်တရစေခြင်းငှါကြောင့်သူတို့သည်သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမသိခင်တစ်စုံတစ်ဦးသိကျွမ်းဖို့အချိန်ကိုယူ.
သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားလျှင်, နှင့်ပြန်ခုန်ထွက်ပေါ်, သင်လုပ်နေပါတယ်ရွေးချယ်မှုသည်ကောင်းလျှင်ကောင်းတစ်ဦးအဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူစစ်ဆေး. သင်ကြီးမားအမှားတွေလုပ်မီသူငယ်ချင်းများရက်စက်စွာရိုးသားနိုင်ပါတယ်.